ओएस एक्स मा अडियो आउटपुट स्रोत कसरी बदल्ने म म्याकबाट हुँ
हामीले प्रयोग गर्ने म्याकको प्रकारमा निर्भर गर्दै, यो एक मिनी एउटा टेलिभिजन वा मोनिटरमा जडित होस्, यो बाह्य मोनिटरमा जडित ल्यापटप होस् वा स्टेरियो वा कुनै अन्य कन्फिगरेसन, अपरेटिंग सिस्टमबाट नै। हामी स्थापना गर्न सक्दछौं जहाँ हामी म्याकमा बजाईएको ध्वनी बाहिर आउन चाहन्छ। यद्यपि यो सत्य हो कि म्याक स्पिकरहरू खराब छैनन्, तिनीहरूले केहि बढी शक्ति लिन सक्दछौं, हामी उपकरणहरूको फाइदा लिन सक्छौं जुन हामीसँग म्याक अडियो पुन: उत्पादन गर्न जडित छ। उदाहरण को लागी, हामी म्याक मिनी बोक्ने एकीकृतको सट्टा हाम्रो टेलिभिजनको स्पिकरहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं।
यदि हामीसँग हाम्रो म्याक एम्प्लीफायरको साथ स्टेरियोमा जडित छ भने, हामी अडियो आउटपुट पठाउन सक्दछौं जब हामी चलचित्र जडान गर्छौं उपकरणमार्फत सुन्न को लागी, यसलाई मजा लिनको लागि। जब हामी हाम्रो म्याकमा परिधी जडान गर्छौं, ओएस एक्सले यसलाई पहिचान गर्छ र यसलाई कस्तो प्रकारको छ त्यस अनुसार वर्गीकरण गर्दछ। यदि हामीसँग म्याक, दुबै उपकरणहरूसँग टेलिभिजन र स्टेरियो जडित छ ध्वनि खण्डमा उनीहरूलाई सामग्री प्लेब्याकका लागि आउटपुटको रूपमा चयन गर्न सक्षम हुन देखा पर्नेछ.
ओएस एक्समा अडियो आउटपुट स्रोत परिवर्तन गर्नुहोस्
पहिले हामी जानु पर्छ प्रणाली प्राथमिकताहरू। सामान्यतया हामी यसलाई डकमा फेला पार्छौं, तर यदि यो तपाईंको केस हैन भने, तपाईं यसलाई Launchpad खोल्न को लागी पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र गियर व्हिलको खोजी गरेर जुन यो विकल्पलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बक्समा देखा पर्नेछ, हामी क्लिक गर्नेछौं ध्वनी विकल्पविकल्पहरूको दोस्रो प row्क्तिमा अवस्थित।
तीन विकल्पहरू तल देखाइनेछ: ध्वनि प्रभावहरू, आउटपुट, र इनपुट। Exit मा क्लिक गर्नुहोस् ताकि ती सबै यन्त्रहरू देखाउँछन् जुन हामीले हाम्रो म्याकसँग कनेक्ट गरेका छौं र हामी आवाज पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं।
अब हामी केवल उपकरण छान्नु पर्छ, ब्यालेन्स र आउटपुट भोल्युम समायोजित गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » ओएस एक्समा अडियो आउटपुट स्रोत कसरी परिवर्तन गर्ने
नमस्ते, जब तपाइँ "iMac जडान गर्नुहोस्" को उदाहरण को लागी, iMac को आउटपुट के तपाइँको मतलब के हो ... ??? मसँग एक iMac एक स्टेरियो जडित छ, तर म हेडफोन आउटपुटबाट aux इनपुटमा गर्दछु। उपकरणको… .. र जब म तपाईंलाई पढ्छु मलाई थाहा छैन यो अर्को पोर्टमा जडान हुन सक्छ कि…। त्यसैले मेरो प्रश्न।
मसँग विशेष रूपमा म्याक मिनी छ र मसँग यो HDMI मार्फत एक टेलिभिजनमा जडान भएको छ। मेरो रुचिमा निर्भर रहँदै, म चयन गर्न सक्दछु कि म म्याक मिनीको स्पिकर मार्फत वा टिभी स्पिकरहरू मार्फत अडियो पुन: उत्पादन गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईसँग यो जडित छ, तपाईले आउटपुटको प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाई इमेकमा मोनिटर वा टिभी कनेक्ट गर्नुहुन्न र तपाईले त्यहाँ अडियो पुन: उत्पादन गर्न चाहानुहुन्छ।
यसले मलाई असफल गर्दछ कि म दुई उपकरणहरू चयन गर्न सक्दिन - जस्तै hdmi आउटपुट र एकीकृत स्पिकर।
Leticiadd लाई जवाफ दिनुहोस्